မွနျမာနိုငျငံ ဗွိတိသြှကုနျသညျကွီးမြားအသငျးနဲ့ Slade အိမျခွံမွဝေနျဆောငျမှုအဖှဲ့တို့ပူးပေါငျးပွီး ကပျရောဂါဆိုးကွီးကို ဘယျလိုကာကှယျမလဲ ? ? ? – SoShwe
Home/Home & Property/မွနျမာနိုငျငံ ဗွိတိသြှကုနျသညျကွီးမြားအသငျးနဲ့ Slade အိမျခွံမွဝေနျဆောငျမှုအဖှဲ့တို့ပူးပေါငျးပွီး ကပျရောဂါဆိုးကွီးကို ဘယျလိုကာကှယျမလဲ ? ? ?
မွနျမာနိုငျငံ ဗွိတိသြှကုနျသညျကွီးမြားအသငျးနဲ့ Slade အိမျခွံမွဝေနျဆောငျမှုအဖှဲ့တို့ပူးပေါငျးပွီး ကပျရောဂါဆိုးကွီးကို ဘယျလိုကာကှယျမလဲ ? ? ?
မွနျမာနိုငျငံ ဗွိတိသြှကုနျသညျကွီးမြားအသငျးနဲ့ Slade အိမျခွံမွဝေနျဆောငျမှုအဖှဲ့တို့ ပူးပေါငျးပွီး ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါဆိုးကွီး Covid-19 ကို ခုခံကာကှယျဖို့အတှကျ ဘယျလိုမြိုးလုပျဆောငျခကျြတှကေို ပွုလုပျပေးသှားမလဲဆိုတာကို မွနျမာပွညျလူထုကို ကွငွောလိုကျပါပွီ။
မွနျမာ့စီးပှားရေးအဖှဲ့ဝငျတှကေလညျး မွနျမာနိုငျငံမှာ Covid-19 ပြံ့ပှားခွငျးကို ရပျတနျ့စဖေို့အတှကျ ကူညီဆောငျရှကျသှားမယျလို့ ကတိစကားဆိုလာပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရကျအခြို့က မွနျမာနိုငျငံ ဗွိတိသြှကုနျသညျကွီးမြားအသငျးက အဖှဲ့ဝငျတှကေို ရောဂါပိုးပြံ့နှံ့မှုကို ထိနျးခြုပျရပျတနျ့စနေိုငျဖို့အတှကျ စီစဉျရေးဆှဲထားတဲ့ စီမံခကျြတှကေို ရေးသားတငျပွခဲ့တယျလို့ သိရှိရပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံ ဗွိတိသြှကုနျသညျကွီးမြားအသငျးက ဝနျထမျးတှရေဲ့ ကနျြးမာရေးကိုရှေးရှုပွီး အလုပျကို အိမျကနလေုပျနိုငျပွီး စီးပှားရေးဆိုငျရာအစညျးအဝေးပှဲတှကေိုလညျး အှနျလိုငျးကနတေဈဆငျ့ တကျရောကျစမှောဖွဈတယျလို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ စီစဉျထားတဲ့ လူမှုရေးဆိုငျရာ လှုပျရှားမှုအစီအစဉျတှနေဲ့ သငျတနျးပေးလကေ့ငျြ့မှုတှကေိုလညျး အငျတာနကျကနတေဆငျ့ လလေ့ာသငျယူနိုငျအောငျ ပွုလုပျပေးသှားမယျလို့ သိရပါတယျ။
ကမ်ဘာ့ကပျဆိုးရောဂါကွီးပြံ့နှံ့မှုဟာ အိမျခွံမွစြေေးကှကျကို ဂယကျရိုကျစခေဲ့ပွီး Slade အိမျခွံမွဝေနျဆောငျမှု ကုမ်ပဏီကလညျး ရကျသတ်တပတျ၂ ပတျအတှငျးမှာ လုပျငနျးခှငျရုံးခနျးကို အကနျ့အသတျမရှိပိတျသိမျးပွီး ဝနျထမျးမြားကို အိမျကနေ အလုပျလုပျစမှောပဲ ဖွဈတယျလို့လညျး ကွငွောခဲ့ပါတယျ။
Slade အိမျခွံမွဝေနျဆောငျမှုကုမ်ပဏီ စီမံအုပျခြုပျရေးမှူး Hugo Slade က စီးပှားရေးကိုတော့ ပုံမှနျအတိုငျး ဆကျလကျလုပျဆောငျနမှောဖွဈပွီး စြေးကှကျကိုတော့ အနညျးငယျ ဂယကျရိုကျစမေညျ ဖွဈကွောငျးကို သတိပေးပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ Hugo Slade က “Slade ကုမ်ပဏီရဲ့ ရုံးတှငျးမူဝါဒဟာ ပွညျ့စုံပွီး ကုမ်ပဏီဝနျထမျးတှကေိုလညျး ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ ထိခိုကျနဈနာမှုတှမေရှိအောငျ စီမံဆောငျရှကျထားပေးတာပဲဖွဈပါတယျ။ ကနျြးမာရေးဆိုငျရာ စိနျချေါမှုတှမွေငျ့မားနတေဲ့ ယခုအခြိနျမှာတော့ ဝယျယူသူဖောကျသညျတှဟော စြေးကှကျအခွအေနနေဲ့ပတျသကျပွီး သိလိုတာတှမြေားနတောကို နားလညျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး ကြှနျုပျတို့က တှရှေိ့လလေ့ာခကျြတှကေို တတျနိုငျသမြှ တငျပွအသိပေးသှားမှာဖွဈတယျ။” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယျ။
မြန်မာနိုင်ငံ ဗြိတိသျှကုန်သည်ကြီးများအသင်းနဲ့ Slade အိမ်ခြံမြေဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့တို့  ပူးပေါင်းပြီး ကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ? ? ?
မြန်မာနိုင်ငံ ဗြိတိသျှကုန်သည်ကြီးများအသင်းနဲ့ Slade အိမ်ခြံမြေဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းပြီး ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဆိုးကြီး Covid-19 ကို ခုခံကာကွယ်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပြုလုပ်ပေးသွားမလဲဆိုတာကို မြန်မာပြည်လူထုကို ကြေငြာလိုက်ပါပြီ။
မြန်မာ့စီးပွားရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ Covid-19 ပျံ့ပွားခြင်းကို ရပ်တန့်စေဖို့အတွက် ကူညီဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ကတိစကားဆိုလာပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အချို့က မြန်မာနိုင်ငံ ဗြိတိသျှကုန်သည်ကြီးများအသင်းက အဖွဲ့ဝင်တွေကို ရောဂါပိုးပျံ့နှံ့မှုကို ထိန်းချုပ်ရပ်တန့်စေနိုင်ဖို့အတွက် စီစဉ်ရေးဆွဲထားတဲ့ စီမံချက်တွေကို ရေးသားတင်ပြခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဗြိတိသျှကုန်သည်ကြီးများအသင်းက ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကိုရှေးရှုပြီး အလုပ်ကို အိမ်ကနေလုပ်နိုင်ပြီး စီးပွားရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးပွဲတွေကိုလည်း အွန်လိုင်းကနေတစ်ဆင့် တက်ရောက်စေမှာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စီစဉ်ထားတဲ့ လူမှုရေးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်တွေနဲ့ သင်တန်းပေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုလည်း အင်တာနက်ကနေတဆင့် လေ့လာသင်ယူနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ကပ်ဆိုးရောဂါကြီးပျံ့နှံ့မှုဟာ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ကို ဂယက်ရိုက်စေခဲ့ပြီး Slade အိမ်ခြံမြေဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီကလည်း ရက်သတ္တပတ်၂ ပတ်အတွင်းမှာ လုပ်ငန်းခွင်ရုံးခန်းကို အကန့်အသတ်မရှိပိတ်သိမ်းပြီး ဝန်ထမ်းများကို အိမ်ကနေ အလုပ်လုပ်စေမှာပဲ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
Slade အိမ်ခြံမြေဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Hugo Slade က စီးပွားရေးကိုတော့ ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေမှာဖြစ်ပြီး ဈေးကွက်ကိုတော့ အနည်းငယ် ဂယက်ရိုက်စေမည် ဖြစ်ကြောင်းကို သတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Hugo Slade က “Slade ကုမ္ပဏီရဲ့ ရုံးတွင်းမူဝါဒဟာ ပြည့်စုံပြီး ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေမရှိအောင် စီမံဆောင်ရွက်ထားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုတွေမြင့်မားနေတဲ့ ယခုအချိန်မှာတော့ ဝယ်ယူသူဖောက်သည်တွေဟာ ဈေးကွက်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိလိုတာတွေများနေတာကို နားလည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်ုပ်တို့က တွေ့ရှိလေ့လာချက်တွေကို တတ်နိုင်သမျှ တင်ပြအသိပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
Previous COVID-19 နဲ့ အိမျခွံမွစြေေးကှကျ အခွအေနေ။
Next Coronavirus ကိုတိုကျထုတျရငျး ခကျခဲတဲ့အခြိနျတှမှော ပြျောပြျောနတေတျကွတဲ့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးမြား။